OpenSUSE Tumbleweed Newbie Kuisa Nongedzo Nhanho-nhanho | Linux Vakapindwa muropa
Nhanho-nhanho yakavhurikaSUSE Tumbleweed Newbie Kuisa Nongedzo
Mangwanani vakomana, panguva ino Ini ndichatora mukana newe kugovana ino yekuisa gwaro kubva kuvhuraSUSE, kuve yakanangana yako Tumbleweed vhezheni. Iyi vhezheni, ichienzaniswa nedzimwe dzinopihwa neyakavhurikaSUSE, iri Rolling Regedzera vhezheni.
Mune ino kesi Ndafunga kuisa openSUSE Tumbleweed Sezvo zviri kufinha uye kunetesa kwandiri kuti ndigadzirise system pese panenge paine vhezheni itsva, ndosaka ndichifarira kutenderera masisitimu zvirinani.
Kune avo vasingazive iyi modhi, ini ndinokuudza zvishoma, iko kutenderera kuverenga izvi zvinogara zviri mukuenderera mberi kukura Nezve software software mukusimudzira kwese, tichagara tiine ichangoburwa asi yakagadzikana.
Pasina zvimwe, isu tichatanga neyekuisa maitiroKune vanhu vazhinji vanofunga kuti iyo sisitimu inoitirwa vashandisi vemberi, kana zvisiri, kune avo vatsva kuLinux vanongofanira kuita chikamu chavo uye kuve nemoyo murefu.
Kungo taura, kana usiri kunyatsoziva zvauchazoita, ndinokurudzira kuti utange washandisa muchina chaiwo.
1 VhuraSUSE Tumbleweed Kuisa Nongedzo
1.1 Zvinodikanwa zvekumisikidza kuvhuraSUSE
1.2 Sisitimu yekurodha pasi
1.3 Gadzirira iyo yekuisa midhiya
1.4 Nhanho-nhanho kumisikidzwa kwe openSUSE Tumbleweed
VhuraSUSE Tumbleweed Kuisa Nongedzo
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kufunga nezve zvinodikanwa zveyakanaka system performance:
Zvinodikanwa zvekumisikidza kuvhuraSUSE
1GB RAM zvishoma, zvimwe zvirinani
10GB shoma disk, zvimwe zvirinani
DVD kana USB chiteshi
Sisitimu yekurodha pasi
Nhanho inotevera ndeyekuodha pasi mufananidzo weiyo system kune izvi isu tinoenda kune yayo yepamutemo webhusaiti uye mune kurodha chikamu Ichazotipa zvinoverengeka magirazi kubva kwatingawana iyo system.
Gadzirira iyo yekuisa midhiya
Kana uchizoshandisa DVD kupisa mufananidzo iwe unogona kushandisa anotevera zvirongwa:
Kana iwe uchizotora chishandiso che USB unogona kutora zvinotevera:
Windows: Unogona kushandisa Universal USB Installer kana LinuxLive USB Musiki, zvese zviri nyore kushandisa. Kunyangwe paine zvakare chishandiso icho iyo yakavhurikaSUSE timu inotipa isu zvakananga, inonzi Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Studio ImageWriter.
Linux: Tinogona zvakare kutsvaga munyori wemifananidzo, inova iyo sisitimu imwechete seWindows imwe, uye tinogadzira yedu usb inokwenenzverwa kana tinogona zvakare kushandisa iyo dd yekuraira kubva kune iyo terminal.
dd bs = 4M kana = / nzira / kuenda / kuvhuraSUSE.iso ye = / nzira / ku / tu / usb sync
Nhanho-nhanho kumisikidzwa kwe openSUSE Tumbleweed
Waita zviri pamusoro, isu tinoisa yedu yekumisikidza yepakati uye boot iyo.
Tichawana yekutanga skrini uko isu tichasarudza sarudzo "Isa"
Ichatanga kutakura zvese zvinodikanwa kutanga kuiswa.
Apedza maitiro iyo yekutanga skrini inoonekwa, ndipo patinosarudza mutauro wedu uye dhizaini yekhibhodi, pano ivo zvakare vanotiratidza iwo mamiriro uye mamiriro ekushandiswa kwesisitimu:
Sarudzo inotevera ndeyekuti ichatipa isu kusarudza iyo desktop desktop yatinozoisa kana neimwe nzira kana iri yekushandisa kugovera nemaseva mabasa.
Mune yakasarudzika sarudzo tinowana zvinotevera sarudzo, kwatinogona kusarudza mapakeji nenzira yakasarudzika, tinogonawo kuona kuti zvinotiratidza dzimwe nharaunda mbiri.
LXDE uye XFCE.
Kana iwe uri newbie ingosarudza iyo desktop desktop, Ndinokurudzira kuti utange neLXDE kana XFCE, kwandiri ndakasarudza plasma.
Ipapo isu tichafanirwa kusarudza kuti iyo system ichaiswa kupi, apo yekutanga ndeyekuiisa pane rese diski.
Kana iwe uine imwe sisitimu yekushandisa kana zvakapusa iwe unoda kuita tsika yekumisikidza, isu tichaenda kusarudza sarudzo "Zviripo zvikamu"
Yakatotsanangurwa iyi poindi, zvinotevera kusarudza nguva yedu yenguva:
Y pakupedzisira tinogadzira yedu mushandisi mushandisi, Ini ndinokurudzira kuremadza autostart:
Chekupedzisira, inoratidza masisitimu atakasarudza uye isu tinongofanirwa kubaya kuisa, skrini yekusimbisa ichaonekwa patinoziva zvatiri kuita uye kuti hapana kudzokera kumashure.
Pakupedzisira, kuiswa kweiyo system uye kurodha pasi kwemapakeji kunotanga.
Pano iwe unongofanirwa kumirira, nekuti iyo yekurodha nguva yemapakeji uye kumisikidza kunoenderana neyako internet kubatana. Pakupedzisira isu tinongobvisa yedu yekuisa midhiya uye isu tinotanga yedu system zvakajairika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Nhanho-nhanho yakavhurikaSUSE Tumbleweed Newbie Kuisa Nongedzo
alexander orozco akadaro
Ndiri mukuona kweiyi yakanakisa sisitimu inoshanda asi ini ndoda kuve neye post-yekumisikidza gwara nekuti ini ndinoona zvimwe zvikanganiso mu distro senge iyo firefox isiri muchiSpanish nekukanganisa kunyangwe iri nyore kugadzirisa; kuve mune iyo virtualization iyo zvinoita kuti ndiwedzere kuoma ini ndiri kurwa.
Pindura kuna Alexander Orozco
CentOS 7 yekumisikidza gwara nhanho nhanho